यी आश्चर्य लाग्दा कुरा ! जुन विवाहको अघिल्लो रात युवतीहरुले सोच्ने गर्छन् ! – Medianp
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, फागुन ३०, २०७५१६:४७
काठमाडौँ । विवाहित युवतीको मनमा विवाह अगाडी अनेक कुराहरु खेलीरहेका हुन्छन् । नयाँ ठाउँ, घर, परिवार र नयाँ जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुँदा यस्ता कुराहरु सोच्नु सामान्य नै हो । आफ्नो जन्मघर छोडेर पराइ घर जानु त्यति सहज त छैनन् । तर यो नियमलाई हरेक महिलाले स्वीकार्नुपर्छ । त्यस्तै आज हामी तपाईहरुलाई विवाह अगाडी हरेक महिलाले सोच्ने केही कुराहरुको बारेमा बताउन गइरहेका छौँ ।
१.घरको व्यवहार : हरेक युवतीले आफ्नो माइतीघरसँग तुलना गर्ने गर्छन् । त्यहाँ कस्तो माया पाइएला ? अर्काको घर न हेला पो भइने होकी ? जस्ता कुराहरु महिलाले बिहे अगाडी नै सोच्ने गर्छन् । आफु विवाह गरेर जानुभन्दा अगाडी नै युवतीहरुको मानमा अनेकौ प्रश्न उठ्ने गर्छ ।
२.जिम्मेवारी ः मानिसहरुले युवतीहरु विवाह अगाडी नै हनिमुन कसरी मनाउने भन्ने बारे सोचेका हुन्छन् भन्छन् । तर त्यस्तो नभएर युवतीहरुले आफु अरुको घरको जिम्मेवारी लिन सक्ने भएको छु वा छैन् जिम्मेवारी के रहन्छ भन्ने कुरा धेरै सोचिरहेका हुन्छ ।
३.जीवन साथीको बारे : विवाह अगाडी हरेक युवतीले आफ्नो जीवन साथीको बारेमा सोच्ने गर्छन् । आफ्नो पति कस्तो होला ? घरपरिवार कस्तो पर्ला ? भन्ने कुराले धेरैलाई पिरोलिरहेको हुन्छ । कोही पुरुषहरु आफ्नो श्रीमतीलाई ख्याल नगर्ने हुन्छन् भने केही पुरुषहरु श्रीमतीलाई खुसी राख्न हरदम प्रयासरत हुने गर्छन् । त्यसकारण विवाह अगाडी युवतीहरुले यस्तो सोच्नु स्वभाविक हो ।
४.शारिरिक सम्बन्ध बारे : विवाहपछि शारिरिक सम्बन्ध राख्नु कुनै नौलो कुरा भएन । तर विहेको पहिलो दिन शारिरिक सम्बन्ध नराख्न के गर्ने भन्नेमा विषयमा युवतीहरुले धेरै सोच्ने गर्छन् ।